Edza Shona yako level - Central Language School, Cambridge
Tisati taona chisarudzo chipi kana kuti kuongorora kwaunofanira kutora, tinoda kuziva kuti nderei muChirungu chako. Heino chibvumirano chewebsite yeCambridge Assessment, apo iwe unogona kutora chirwere cheGerman Chirongwa.
Kuti uedze English yako, tora pano.
Chigumisiro chinokuudza iwe chiyero chako, uye zvipi zvidzidzo zvaunokwanisa kutora. Tarisa 'Courses We Offer'peji, kana, kana uchida kutora kuongorora, tarisa'Maminitsi'peji.
Nhamba yako yakarongwa pachiyero kubva kuA1, A2, B1, B2, C1, kana C2 (yakakwirira).
Chigumisiro chinopiwa nemiedzo mishomanana inongova nhungamiro inofanirwa, saka tinoedza nhamba yako nenzira yakarurama paunosvika, tisati tadzidzisa iwe, nekukuongorora iwe paunenge uchifambira mberi.